नेपालमा आज पनि ठुलो संख्यामा थपिए नयाँ को-रोना संक्रमित, कुन जिल्लामा कति संक्रमित थपिए ? (हेर्नुहाेस् विवरण सहित) – List Khabar
Home / समाचार / नेपालमा आज पनि ठुलो संख्यामा थपिए नयाँ को-रोना संक्रमित, कुन जिल्लामा कति संक्रमित थपिए ? (हेर्नुहाेस् विवरण सहित)
नेपालमा आज पनि ठुलो संख्यामा थपिए नयाँ को-रोना संक्रमित, कुन जिल्लामा कति संक्रमित थपिए ? (हेर्नुहाेस् विवरण सहित)
admin February 4, 2022 समाचार Leaveacomment 93 Views
नेपालमा आज पनि ठुलो संख्यामा थपिए नयाँ को-रोना संक्रमित, यति धेरैकाे मृ-त्यु ! पछिल्लो २४ घण्टामा ३६३७ जनामा को- रोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । ११५८२ जनामा गरिएको नमूना परीक्षणमा ३६३७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार सो समयावधिमा १२ जनाको मृ- त्यु भएको छ भने ७५५५ जना संक्रमति अस्पतालबाट निको भएर डिस्चार्ज भएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार २४ घण्टामा ८१५७९६ जनाले को- रोना विरुद्धको खोप लगाएका छन् भने अहिले देशभर ६९२९१ जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा ११२३ संक्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंमा ८६८, भक्तपुरमा ८५ र ललितपुरमा १७० संंक्रमित थपिएका हुन् ।
Previous लकडाउन भए पनि एसइइ(SEE) हुने मिति तोकियो
Next महिनावारी हुँदा असाध्यै पेट दुख्छ ? उसोभए घिउको यो उपाय अपनाउनुहोस्